2008-04-12 @ 13:01 in Andavanandro
Tena sarotra tokoa ity teny malagasy ity. Marina fa haiko ihany ilay izy saingy ny manahirana ahy dia hoe azon'ny olona ve izay soratako? Io lohateny io izay ahiako fa tsy azon'ny atsasak'izay mamaky. Aleo soratana ihany izay mety ho dikany na tsy dia haiko loatra aza ny teny frantsay:" Vitesse de la charette". Lava be raha toa ka soratako hoe hafainganam-pandehan-tsarety sady sao voakiana mandrakariva fa tsy mety ho fohy mihitsy ity teny malagasy ity.
Ny fiainana andavanandro eto Antananarivo no lazaiko amin'io. Tsy ho an'ny maika mihitsy eto amin'ity tanàna ity fa manaraka ny onjan'ny tsy mahara-dalana eny isika rehetra. Ny lalana tery nefa ny sarety tarihina tsy ho afa-mihazakazaka mihoatra noho ny fiara mitandrahatra efa tsy mampaneno anjomara intsony. Dia toy izany ihany koa eny amin'ny lalan'ny mpandeha an-tongotra, efa terin'ny mpivarotra fa ny mpiantsena koa tsy azo terena handaha haingana mihitsy. Ianao no tezitezi-poana irery raha vao maneho tsy fahafaliana ka mety hahazo ny teny hoe fa vahiny avy aiza koa angaha ity?
Dia toy izany koa ny fiainana ankapoben'ny Malagasy. Toa tsy miraharaha no fijery azy. Hafa ny lalàna mifehy ny mpiara-monina. Toa tsy natao ho an'ny maika eto amin'ity tanàna ity. Manaraka ny dian-tsarety ny fiara hafa rehetra ka tsy mahagaga loatra raha taraiky lalandava isika amin'ny ankapobeny. Fomba fihevitro ihany anefa izany fa anjaran'ny tsirairay ny mieritreritra.